२० लाख ३० लाख लिने भनेर हल्ला गर्ने लाई दीपकराज गिरीको घुमाउरो झटारो - Charchit Entertainment!
Home fnews ijob २० लाख ३० लाख लिने भनेर हल्ला गर्ने लाई दीपकराज गिरीको घुमाउरो झटारो
२० लाख ३० लाख लिने भनेर हल्ला गर्ने लाई दीपकराज गिरीको घुमाउरो झटारो
Anonymous July 27, 2019 fnews, ijob,
गएको साता अभिनेत्री पूजा शर्माले एक सिनेमाका लागि २० लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक लिएको खबरले चर्चा पायो। पूजाले त्यसको घूमाउरो पारामा स्टाटस लेख्दै पछि बचाउ गरिन्।
त्यो भन्दा अगाडि उनले 'पोइ पर्‍यो काले'का लागि पनि २० लाख नै पारिश्रमिक लिएको खबर नआएको होइन।
त्यस्तै पूजाको मात्र होइन अर्की अभिनेत्री सुष्मा कार्कीले पनि 'फटाहा फणिन्द्रे'का लागि १० लाख पारिश्रमिक लिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअगाडि साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले 'रातो टिका निधारमा'मा सिनेमाको लागि १५-१६ लाखको हाराहारीमा पारिश्रमिक लिएको सार्वजनिक नभएको होइन।
अब अभिनेत्रीहरूको यसरी सार्वजनिक भएको पारिश्रमिकको ग्राफमा शंका गर्नेहरू धेरै छन्। यसबारेमा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
तर यसरी बाहिरिएको खबरमा अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले पनि आफ्नो धारणा राखेका छन्। उनले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै आफ्नो धारणामा राखेका हुन्।
गिरीको भनाइमा सत्यता छ। आजसम्म कुनै नेपाली कलाकारले कति कर तिरे? त्यो सार्वजनिक भएको छैन। केहि वर्ष पहिले नेपाली कलाकारलाई पनि करको दायरामा ल्याउन प्यानमा दर्ता गराउने अभियान सुरू गरिएको थियो। त्यसमा केहि कलाकारहरूले प्यान नम्बर लिए पनि।
तर त्यसपछि को कलाकारले, कति कर बुझाए, आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन। गतिलै किसिमले घरगाडी जोडेका कलाकारहरूको जमात पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ।
यस्तोमा कलाकारको पारिश्रमिकको चर्चा हुनु तर करको नहुनु आफैमा एउटा सोचनिय विषय पनि हो।
उदाहरणका लागि स्टाटस लेख्ने दिपकलाई लिन सकिन्छ। उनी र उनको निर्माण समूहले 'छक्का पञ्जा' सिनेमा बनाए यता राम्रै कमाइ गर्दै आएका छन्। सबै कलाकार सेयरमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूले पारिश्रमिक र मुनाफा पनि राम्रै बुझिरहेको बताइन्छ।
दीपक पनि महँगै गाडीमा हिड्छन्। घर पनि राम्रो ठाउँमा जोडेका छन्।
यस्तोमा पारिश्रमिक हैन कर कति तिरे? भन्ने समाचार आओस भन्ने उनको चासो राम्रो हो। तर यसमा यसको सुरूवात आफैबाट दिपकराज गिरीले सुरू गरे झन राम्रो।
करको बारेमा उनलाई उनको स्टाटसमा केहि प्रयोगकर्ताले पनि सोधेका छन्। हुन त यसमा दिपकको चाहना हुनसक्छ, यो काम संचारमाध्यमले नै गरून्।
By Anonymous at July 27, 2019